Noocyada Apple | December 2019
Ugu Weyn Ee Noocyada Apple
Noocyada Apple: xagaaga, dayrta, jiilaalka
Waxaan jeclaan lahaa in aan helo wax ka badan oo dhaqameed ah oo la yaqaan geedkii tufaaxa ee beerta, laakiin tani waa mid aad u adag! Xitaa hadday sidaas tahay, micnaheedu ma'aha in aan wax badan ka ogaanno? Mm, waxaa laga yaabaa in qof dhab ahaantii ogyahay wax badan, laakiin maaha wax badan oo ka mid ah akhristeyaasheena, iyada oo aan lahayn dadaal dheeraad ah, xalliyo kala duwanaanshaha geedaha tufaaxa ee wakiil ka ah waddankeena.
Faa'iidooyinka iyo nacfiyada geedaha tufaaxa ee Semerenko, beerashada iyo daryeelka
Juicy iyo kareysa karisyo kala duwan ee Semerenko diyaar u yihiin goosashada dhammaadka September. Dad badan ayaa jecel inay ku raaxaystaan ​​miraha leh dhadhan macaan oo khamri ah, inkastoo asal ahaan kala duwanaanshuhu uu weli yahay qarsoodi maanta. L.P. Simirenko, Breiter Yukreeniyaan, ugu horeysay ku tilmaamay noocyada this iyo magacaabay ka dib aabihiis.
Faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka noocyada tufaaxa Shtreyfling, beerashada iyo daryeelka
Geedka geedka ee waddankeena ayaa ku faraxsan leh noocyo kala duwan. In beerta of my awowgood, meesha ugu muhiimsan yahay kala duwan Shtriepel, deriska waxaa loogu yeeray Streyfling ama dayrta dhirta tufaaxa dhirta. Xilliga dayrta, awoowe wuxuu ku faraxsanaa tufaax cajiib leh oo leh roodhi roodhida ah, hilibka basbaaska leh. Apple Shrifel waa hooyad ka mid ah wadamada Baltic.
Waxaan ku koraan geed tufaax ah oo orlik ah oo ku yaal beerta
Sababtoo ah dhadhanka ugu sareeya ee miro iyo sifooyinka nafleyda ee tufaaxa Tufaax ah ee hogaamiya hoggaamiyayaashooda. Waxaa intaa dheer, Ukraine, Belarusian iyo reer Ruushka, ee waddamada halkaas oo noocyada si ballaaran loo beeray, ixtiraam isaga for wax-soosaarka sare iyo precocity. Mid ka mid ah geedka qaan gaadhka ah ayaa ku filan in la quudiyo qoys, laakiin haddii aad rabto inaad lacag ka hesho lacag dheeraad ah, waxaad heli kartaa labo qof oo dheeraad ah.
Astaamaha noocyo tufaax ah ee nacnaca iyo beerista agrotechnology
Badanaa bannaanka ayaa u muuqda in ay koraan dhowr nooc oo geedo tufaax ah dhulkooda. Iyo inta badan doorashadu waxay ku dhacdaa kala duwanaanta Candy, taas oo siinaysa miro casiir ah oo aad u macaan. Midhaha ugu horeysa waxay u muuqaneysaa geedka tufaaxa dhammaadka Julaay, haddii, dabcan, geedka si wanaagsan loo daryeelo. Sida loo sameeyo iyo waxa ay yihiin sifooyinka noocyada kala duwan, waxaanu ku sheegi doonaa arrintan.
Sida loo abuuro oo u koro geedo tufaax ah oo ka mid ah noocyada kala duwan ee Silver Hoof ee goobteeda
Waxaa jira noocyo kala duwan oo tufaax ah: jiilaalka, xagaaga, dayrta, dhanaan, macaan. Maqaalkani, waxaan eegaynaa mid ka mid ah noocyada xagaaga ee ugu caansan - geedka tufaaxa dahabka ah, dabeecadaha kala duwan, xeerarka beeritaanka iyo daryeelidda geed. Sheekada geedka tufaaxa ee "Grunge Silver" Noocyada kala duwan ee geedaha tufaaxa "Haraga lacagta" ayaa la soo raray 1988-kii oo ku yaal saldhigga tijaabada ah ee Sverdlovsk ee kalluunka Kotov Leonid Andrianovich.
Kala duwanaanta tufaaxa "Vasyugan": dabeecadaha, beerashada agrotechnik
Dhirta Apple "Vasyugan" waxaa loola jeedaa noocyada qoraalka ah ee geedaha tufaaxa, kuwaas oo noqonaya kuwo sii kordhaya caan u ah sababtoo ah isku-xidhnaanshaha, bacriminta, boogeenta hore iyo muuqaal aan caadi ahayn. Iyo "Vasyugan", waxaa intaa dheer, sidoo kale wuxuu leeyahay caabi baraf sare ah. Aan fiirino aragti dhaw oo kala duwan.
Apple kala duwan "Ligol": sifooyinka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Midhaha noocan ah sida tufaaxa ayaa bilaabay in la cuno waqti dheer ka hor. Xitaa awoowayaasheenu waxay ogyihiin sifooyinka wanaagsan ee midhaha. Waxaa ku jira xaddi badan oo fiitamiin iyo macdan ah oo ka caawiya jidhka inuu ka soo kabsado cudurro kala duwan isla markaana ku haayo qaab wanaagsan. Iyo imisa noocyo noocyo cuntooyin tufaax ah ayaa la sameeyay maanta.
Maxay tahay fallaadh, maxay u baahan tahay orchids iyo sida loo daryeelo ubax?
Sidee si madax bannaan dacaayad geedo melissa - habka "laga soo xoqdo". Faahfaahin ku saabsan beerista cawska basbaas
Sida loo doorto bogga ilaalinta qorraxda ee galka
12 nooc oo dhir u gaar ah oo loo yaqaanno oregano. Astaamaha noocyada, sawirada, iyo sidoo kale talooyinka daryeelka
Mimulus ama, sida waxaa sidoo kale loo yaqaan, gubastik waa dhirta sanadlaha ah ee qurux badan ee qoyska nornichnikov. Tani maaha in qofna uu wali sii wadi doono maqnaanshaha, isagoo arkaya ugu yaraan hal qulqulo jilicsan ee mimulyus. Homeland ee ubaxan waa Waqooyiga Ameerika. Waxay ku nooshahay sponge meelo leh qoyaan badan iyo cimilada kulul. Read More
Qodobka Sare ee Strawberry: sharaxaad, faa'iidooyin, nidaam wax soo saar
Quruxda dheriga ama gerbera Jamson sida warshad gudaha ah: sifooyinka dhalida iyo daryeelka ubaxa
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyada Apple 2019